Somalia online: 01/07/13 - 01/08/13
Daawo:Gabar Gaaloowday Oo Diinta Islaamka Ka Baxday
Daawo:Gabar Gaaloowday Oo Diinta Islaamka Ka Baxday Oo Barnaamish Ay Ka Diyaariyeen Qolooyin Gaalo Ah
Thursday, 01 August 2013 00:17
Kadib markii ay Xerooyinka Qaxootiga ee Soomaalidda ee Kenya ay soo baxeen Hey*addo Soomaalidda faqiirka ah lacago ku soo jiito si ay Diinta Islaakma uga baxaan,ayaa waxay ku guuleysteen Gabar Soomaalidda xeryaha Qaxootiga ku jiro inay Diinta Masiixiga baraan kadibka ka dhigaan Kirishtaamad aaminsan in Ilaahay uu dhalay Nabi-Ciise oo uu wiil leeyahay.
Gabadhan oo magaaladda Nairobi ee caasimadda Kenya ku nool waqti-xaadirkan ayaa ka sheekeynaysa iyadoo xayeeysiis u samaynaysa qolooyinka kunturaada ku qaata inay Soomalidda Qaxootiga ah gaaleysiiyaan,inay habeen iyadoo dhibaataysan ay bariday Nebi-Ciise kadibna kurbadii haysay laga dul-qaaday,wixii maalintaas ka dambeeyana ay Diinta Islaamka ka baxday,inkastoo marka aad hadalkeeda dhuuxdo aad ogaaneyso inay Diinta uga baxday xoogaa yaroo shilimaad ah oo la siiyay,maadama sida ay qiratay markii ay baratay dad hanti heysto oo Nairobi degan ay ka dhaa-dhiciyeen inay Diinta Masiixiga qaadato,iyagoo siiyay Kutubka Bible,intii ay gurigooda joogtayna u sahlay inay baraan qaabka Ilaahay iyo Nebi-Ciise oo hal Ilaah isku noqonayo inay barido si ay uga kaaftoondo Diinta Islaamka,waa sida ay hadalka u dhigayaan qolooyinka gabadhan faqiirka ah lacagta ku faraqay si ay Diinta Islaamka uga baxdo.
Riix:oo Daawo:Gabar Soomaali oo ka sheekeynaysa Qaabkii ay Diinta Islaamka uga baxday
Ama Hoos Ka Daawo:
Last Updated on Thursday, 01 August 2013 00:42
A sign showing K Street is shown 01 February 2006 in Washington, D.C. A stone's throw from the White House, K Street is an alternative corridor of power in U.S. politics, packed with thick carpeted offices and lobbyists with even deeper pockets. (KAREN BLEIER/AFP/Getty Images)
Askari ka tirsan Nabadsugida oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho
Askari ka tirsan ciidamada nabadsugida ayaa xalay lagu dilay degmada Warta Nabada Ex Wardhiigley, kaasoo rag bastoolado ku hubeysan ay ku toogteen Xaafada Xararyaale.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka askarigan oo la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha Nabadsugida.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxo bastoolado ku hubeysan ay dileen, kadibna ay baxsadeen.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa dilal qorsheysan ay ka dhacayeen degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir.
Ammaanka ayaa u muuqda mid faraha ka sii baxaya, iyadoo maalmo ka hor ay ka dhaceen magaalada Muqdisho qaraxyo.
Isku shaandheyntii Xukuumada oo September dib u dhacday iyo Xildhibaanada oo la fasaxay
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta galay fasax bil ah oo ka bilaaban doonta maanta, iyadoo la soo xiray maanta kalfadhigii aan caadi aheyn ee Madaxweynaha Soomaaliya ku baaqay Xildhibaanada in muddo bil ah ay sii shaqeeyaan.
Kalfadhiga aan caadiga aheyn fadhigiisa 18aad ayaa maanta la soo xiray, iyadoo Xildhibaanada ay horay u soo ansixiyeen dhowr hindiso sharciyeedyo ay soo gudbisay Xukuumada, inkastoo ay dhiman yihiin hindiso sharciyeedyo kale.
Fasaxa Xildhibaanada ayaa baajiyay isku shaandheyntii lagu waday in Golaha Wasiirada lagu sameeyo, maadaama aanay Xukuumad la soo dhisi karin iyadoo fasax uu jiro Baarlamaanka, isla markaana sida dastuurku qabo ay tahay in Xukuumada marka la soo magacaabo muddo 30-cisho gudahood lagu horkeeno.
Waxaa jiray qorshe ku aadanaa in mudanayaasha baarlamanka looga dalbado in muddo todobaad dheeraad ah ay sii shaqeeyaan, si markaas isku shaandheynta Xukuumada lagu shaaciyo, deetana lagu horgeeyo, hase ahaatee uu diiday Gudoonka baarlamaanka.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa la filayaa inay soo laabtaan 2-da bisha September, iyadoo markaas wixii ka dambeeya laga yaabo in is bedelka Xukuumada lagu dhawaaqo.
Warar ay heshay Jowhar.com ayaa sheegaya in Golaha Wasiirada la shaacin doono ka hor 16-ka September, xilligaas uu ka furmayo magaalada Brusless shir Midowga Yurub ay u qabaneyso Soomaaliya oo ku saabsan dib u dhiska dalka.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa jiray hadal heyn badan oo ku aadanaa is bedelka Xukuumada lagu sameeyay, kaasoo intiisa badan la dhameystiray, waxaana Xukuumadan ay ka koobaan doontaa 50-Wasiiro oo isugu jiro 25-Wasiiro, 20-Wasiir kuxigeeno iyo 5-Wasiiru dowle sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo ku dhow dhow xafiisyada madaxda dowladda ee ku howlan is bedelka Xukuumada.
Guddiga qaban-qaabinaya shirka Issimada Puntland oo sheegey in qaban-qabadisa ay marayso heer gebo-gebo ah
Magaaladda lugu wado inuu shirka ka furmo Qardho
Qardho[RBC Radio]Magaaladda Qardho ee xarunta gobolka Karkaar Puntland waxaa lugu wada dhawaan inuu ka furmo shir ay yeelanayaan Issimada Puntland,shirkaas ayaa xiligaan la sheegey inuu heer gebo-gebo ah marayso qaban-qabadisa.
Maal mihii anuu soo dhafney waxaa shirar Qardho ku yeelanayey guddiyada loo xir-saaray shirka Issimada iyagoona ka doodayey habka uu u qabsomi karo shirka iyo nooca shirka uu noqon doono.
Guddiga shirka qaban-qaabinaya ayaa maantey shir ay ku yeeshen Hotel Alla-Aamin ee Qardho waxaa ay ka soo saaren war-murtiyeed ay uga hadlayaan halka ay wax umarayaan,waxana ay ku faah faahiyen wax yaabihi uga qabsoomeyey shirarkii ay yeelanayen,waxana ay tilmaamen inuu si wanagsan ku soo dhamaadey kulamadooda ay kaga arrinsanayeen nooca shirka uu noqon doono iyo qaban-qaabadisa guud.
Sidoo kale waxaa shirkooda guddiga ay ku qeybiyeen war-murtiyeed ka soo baxay guddiyada shirka abaabulaya, iyadoo war-bixintaas dadweynaha iyo bulshada qeybeheeda loo qeybiyey ay ku qornaayeen dhaliilaha wakhtigan ka jira Puntland.
Afhayeenka Guddiga qaban-qaabada shirka Issimada Puntland Mustafe Siciid “Shabac” ayaa saxaafada kula hadley guddaha Hotelka waxana uu si durugsan uga hadley wax yaalaha lugu wado inay isla soo qadaan Issimada Puntland inta uu shirkooda Qardho socdo.
…”"”Issimadu waxay ka arrinsanayaan aayaha Puntland waxana ay isla soo qadi doonan sidii loogu shaqen laha horumarka dalka iyo deegaanka..”"ayuu yiri afhayeenka Guddiga qaban-qaabada shirka Issimada Puntland.
Mustafe Siciid “Shabac” afhayeenka Guddiga qaban-qaabada shirka Issimada Puntland ayaa sidoo kale hadalkiisa kusoo qadey in issimadu ay ka shiri doonaan horumar la’aanta ka jira Puntland taaso uu sheegey in hoosu dhac laga dareemayo adeegyada horumarineed ee horey ujirey.
…”"”Issimadu waxaa ay kalo ka hadli doonan horumar la’aanta ka jira Puntland taaso saamen ku yeelatey adeegyada horumarineed ee Puntland ka jirey,waxana laga arrinsan doona sidi loo kabcinkaro horumarka Puntland…”"”ayuu ku sheegey hadalkiisa.
Shirakaan guddiga loo xilsarey qaban-qabadisa ay sheegen inuu heerkisa ugu danbeyey marayo ayaa horey Wasaarada arrimaha gudaha ee Puntland oo ka hadashey waxay tilmaamtey in aysan waxba kala socon shirka kaasi ka dhacaya xaruunta gobolka Karkaar.
Si kasto ay ahaataba tan iyo bishii hore ayaa abaabulka shirkaasi wuxuu ka socday magaalada Qardho iyadoona xiligaan la sheegey in furitankiisu uu soo dhawyahay.
Kooxo hubeysan oo Baladweyn ku dilay afhayeenkii Odayaasha Dhaqanka gobolka Hiiraan
Baladweyne[RBC Radio]Wararka ka imaanaya magaaladda Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo sheegaya in halkaa lugu diley afhayeenkii Golaha Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan.
Dilkaan ayaa sida ay Raxanreeb.com u xaqiijiyen dad goobta uu dilka ka dhacay ka agdhawa waxaa uu ka dhacay xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne,waxana geestey saddex nin oo bistoolado ku hubeysan.
Afhayeenkii Golaha Odayaasha Dhaqanka Gobolka Hiiraan oo lugudiley Baladwene ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Xuseen Cilmi Ibraahim,illa iyo haddana lama xaqiijin sababta iyo cidda ka dambeysa dilka afhayeenka.
Wax war ah wali kama aysan soo sarin dilkaafhayeenka maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakisha AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Baladweyn,arrintaan ayaa waxaa ay ka dhigeysa inuu wali Baladweyne ka socoto dilalka qorsheysan ee ka dhaca goobo ka mid ah dalka.
Horaanti bishaan anuu ku guda jirno ayaa waxaa guddaha magaaladda Baladweyne lugu diley guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee maxkamadda magaaladaas, Macallin Xasan Cilmi Ciyow,kaaso xiligaan dilkiisa loo hayo dhowr qof.
Violent protests have taken place in Andhra Pradesh over the Telangana issue
Zimbabwe election: Votes counted after 'orderly' polls
Hundreds braved the cold and the wind to stand in queues, which started forming as early as 04:30. Asecurity guard said he saw some people sleeping opposite one polling station.
Daniel Pelka murder: Mother and partner found guilty
Ousted Egypt leader Mohammed Morsi well - EU's Ashton
Linzi Ashton murder: Suspect Michael Cope arrested
Egypt minister: Pro-Morsi protesters to be dispersed
India deadly meal: Head teacher Meena Kumari arrested